Kubatsira kwedu - Shanghai Comi Aroma Co, Ltd.
Chinwiwa girazi Bhodhoro
Zvizorwa girazi Bhodhoro
Zvizorwa Dropper Bottle
Perfume girazi Bhodhoro
Tenderera Pane Perfume Bhodhoro
Yega Yekutarisira Sprayer Perfume Bhodhoro
OEM ODM Sevhisi
3D Mharidzo Kugadzira
KUKUNDA MUZVESE ZVATINOITA
Isu takatsaurirwa kupa yakakwira-mhando kurongedza mhinduro dzinogoneka kune vatengi vedu, uye nekuvandudza zvigadzirwa zvitsva uye zvitsva.
Takazvipira kuisa vatengi vedu pakutanga uye ichipa iyo yepamusoro-soro chikamu chevashandi uye kugutsikana mune zvese maitiro. Tichagara takavhurika, kuvimbika, uye kutaura. Isu tinoedza kugara tichifunga zvinodiwa nevatengi vedu uye nekupa yakanakisa kurongedza mhinduro, zvisinei neyedu yepasi-mutsara.
HUNHU HWAKAKWANA PAKANAKA NEMAZANO
Tinopa zvese Stock-in uye Yakasarudzika kurongedza zvigadzirwa, zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi vedu. Hwedu zvigadzirwa zvigadzirwa zvakanyatso chengetedzwa uye zvinochengetwa pa-ruoko mune yedu Warehouse.
Keming imba yekuchengetera, yakagadzirira kutumira kwechinguva chiziviso, nepo zvigadzirwa zvedu zvechigadzirwa zvinogona kugadzirwa, kupedzwa, uye kudhindwa kusangana neakasarudzika kutaridzika kwechiratidzo chako, kuburikidza neakawanda Maitiro Ekugadzirisa. Kunyangwe iwe uchitsvaga zvemhando yepamusoro stock-muzvinhu kana zvakanakisa mumapakeji akagadzirwa, isu tine zvigadzirwa zvakanakisa uye masevhisi ekuzadzisa zvaunoda uye kupfuura zvaunotarisira.
Isu takaita zvirongwa zvakasvibirira zvakanangana nekubvisa marara nekusimudzira mashandiro, pamwe nekuwedzera kusvika pakuburitsa mapaketi nezvinhu zvakagadziriswazve uye zvinogadziriswazve. Isu takazvipira kuve mugadziri wakasvibirira, uye tinogara tichitsvaga kugadzirisa nekunatsiridza maitiro edu kudzora zvatinoita pasirese.
Kuwedzera imwe nhanho yekuchengetedzeka kuti uve nechokwadi chekuti iwe unozogamuchira kuenderana, kugona, uye kukoshesa pese paunoshanda nesu, isu tiri vaviri ISO 9001 uye ISO 14001 yakasimbiswa. Isu tiri zvakare nemamwe emakuru epasi rese mabrands atinoshanda nawo. Izvi zvitupa uye kuongororwa kunoona kuti iwe unowana zvigadzirwa zvakanakisa, nguva dzese.
Wedzera: Kwete. 1500 Tingwei Road, Jinshan District, Shanghai, China.
Runhare:0086- (0) 516-83202223
Chii chinorehwa chinoreva pane pefiyumu bot ...
Perfume Bhodhoro Evolution: Saizvozvo pefiyumu, d ...
Zvinowanikwa Zvigadzirwa - Sitemap - Mobile Site